Santiago Solari oo ka hadlay wararka ku aadan in Mourinho uu markale ku laabanayo Real Madrid – Gool FM
(Real Madrid) 18 Dis 2018. Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay kooxda reer Japan ee Kashima Antlers bari oo Arbaca ah kula ciyaari doonaan semi-finalka tartanka Club World Cup Abu Dhabi.
Ugu horeyn Solari ayaa ka hadlay sida uu u adag yahay koobka Club World Cup wuxuuna yiri:
“Waxaan siineynaa waxa ugu muhiimsan tartankan si aan ugu guuleysano”.
“Si aan halkan u imaano waxay ahayd inaan ku guuleysano Champions League, waa guul gaar ah, balse waxaan isku dayi doonaa inaan markale koobkan ku guuleysano”.
Intaas kadib Santiago Solari ayaa wuxuu ka hadlay wararka ku aadan in macalinka dhawaan laga ceyriyay Man United ee Jose Mourinho uu la wareegi doono shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid.
“Waxaan sharaf weyn, qadarin iyo ixtiraam u muujinayaa dhamaan asxaabteyda, wararka ku saabsan inuu ku soo laabanayo Jose kooxda Real Madrid, waxay qeyb ka tahay wararka xanta ee maalin kasta, wax saameyn ah kuma yeelan doonto shaqadeena”.
“Waxaan u shaqeenayaa si aan kooxda u siiyo wax walba aan awoodo ee xirfadeyda shaqada tababarka maalin kasta, tani waa falsafadeyda”.